Soo dejisan Viber 5.5.2.28 – Android – Vessoft
Viber – wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sheekeysi la users ee software-ka iyada oo la samaynaayo baaqyo iyo qoraal fariimaha qoraalka ah iyada oo internet ka. Software qabtaan .Wadashaqayntaas ee buugga taleefanka ah oo si toos ah ogaadaa xiriirada meesha software this la geliyo. Viber u saamaxaaya in ay sameeyaan wacaa telefoonnadooda gacanta, iyo landline ee heerka u hooseeya. Software ayaa saamaxaya kuwa isticmaala inay soo diraan stickers, sawiro, cod ama video farriimaha iyo kulan download. Viber u saamaxaaya in ay ku biiraan kooxaha CHAT loogu jecel yahay si aad u eegto macluumaadka ku saabsan dad caan ah ama saaxiibada.
Samaynta wicitaano cod tayo sare leh
Wadaagga ah ee fariimaha qoraalka iyo files
.Wadashaqayntaas La qorin
Baaqyo ku telefoonnada gacanta iyo landline telefoonada